साताको ब्लगर: झलक पौडेल - MeroReport
साताको ब्लगर: झलक पौडेल
स्थायी घर स्याङ्जा भएका झलक पौडेल हाल फूलबारी, पोखरामा बसोवास गर्दै आएका छन् । उनी पृथ्वी नारायण क्याम्पसबाट स्नातक तहमा समाजशास्त्रमा अध्ययनरत जिआइजेडको एउटा प्रोजेक्टमा प्रोग्राम असिस्टेन्टको रुपमा कार्यरत छन् । उनको परिवारमा उनी सहित बुवा, आमा र दुई जना दाइ हुनुहुन्छ ।
इन्टर्नेट चलाउन एकदमै मन पराउने झलक आफ्नो ब्लगमा रचना-कथा र विशेषगरी गजल, अनुभव, विचार पोस्ट गर्ने गरेका छन् । पुराना साथै नयाँ ब्लगरलाई प्रोत्साहन गर्ने क्रममा हामीले यस पटक झलक पौडेललाई साताको ब्लगरको रुपमा फिचर गरेका छौं । प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको छोटो कुराकानी :
तपाईंको पेशाको बारेमा केही बताइदिनुस न ?
पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा मेथाडोन भन्ने प्रोग्राम छ त्यसमा प्रोग्राम अस्सिस्टेन्टको रुपमा तीन वर्षदेखि काम गर्दैछु । त्यस कार्यक्रम अन्तर्गत लागुपदार्थको दुर्व्यसनीमा परेका व्यक्तिहरुलाई सहयोग गर्ने गर्दछौं । मेथाडोन भन्ने एउटा औषधी मार्फत दुर्व्यसनी छुटाउने सानो प्रयास गर्दछौं ।
हामीले दुर्व्यसनीलाई समाजमा पुन:स्थापित गराउन यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं ।
जिआइजेड ले नेपाल सरकार मार्फत सहयोग गर्छ । पोखरा उप-महानगरपालिका र वरपरको क्षेत्रमा लागुपदार्थको दुर्व्यसनीमा परेकालाई औषधी दिने र जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने काम गर्छ ।
अब ब्लगिङको कुरा गरौं । कसरी ब्लगिङ गर्न थाल्नु भयो ?
मैले ब्लग भनेको के हो भन्ने थाहा नपाइकन नै खोलेको थिएँ । जि मेल चलाउँथें । त्यो बेलामा मलाई एउटा मेल आएको थियो । निःशुल्क वेब साइट चलाउने भन्ने । कसरी निःशुल्क वेब साइट बनाउने भनेर खोज्दै जाँदा ब्लग भन्ने भेटियो । यो आफ्नै वेब साइट हो भन्ने ठानेर मैले खोलें ।
कहिले देखि ब्लगिङ गर्न थाल्नु भयो ?
सन् २००९ देखि । समयले भ्याएसम्म पोस्ट गर्ने गर्छु । कहिले-काहीँ अपडेट गरिरहेको छु ।
के -के पोस्ट गर्नु हुन्छ ब्लगमा ?
रचना – कथा , विशेषगरी गजल , अनुभव, विचार पोस्ट गर्ने गरेको छु । समसामयिक विषयमा पनि लेख्ने गर्छु ।
आफ्नो ब्लगको नामabrief look राख्नु भएको छ । यसको कारण ?
मेरो नाम झलकको अर्थ छोटो हेराइ भएकोलेabrief look राखेको हुँ ।
पछिल्लो पटक के पोस्ट गर्नु भयो ?
मेरो जन्मदिनको उपलक्ष्यमा मेरा २२ बर्ष #story #experience लेखेँको थिएँ । मेरो २२ वर्षका अनुभव, आजसम्म भोगेका, जानेका कुरालाई लेख्ने प्रयास गरेको छु ।
फेसबुक , ट्वीटर , इमेल र फोनबाट प्रतिकिया आउने गर्छन् । ब्लगमा नै कमेन्ट आउने त थोरै हुन्छ र हाम्रो बानी पनि के छ भने हामी पढ्छौं तर पढेको थाहा दिँदैनौं, कमेन्ट गर्दैनौं र रेस्पोन्स गर्दैनौं ।
ब्लगिङ गर्दा के कुरामा ध्यान दिनु पर्छ ? के ब्लगिङमा अचार-संहिताको जरुरी छ ?
समाजमा उच्छृङ्खलता फैलाउने खालको कुरा पोस्ट गर्नु भएन । ब्लगर स्वयंको नैतिकताको पनि कुरा हो । नैतिक रुपमा आफैं सचेत हुने कुरा हो । छुट्टै नियम, अचार-संहिता बनाएर बाँधिन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन ।
पोखरामा ब्लगिङ गर्ने ट्रेन्ड कस्तो पाउनु भएको छ ?
त्यति धेरै पाएको छैन ।
अहिले नयाँ मिडिया र सोसिअल नेट्वर्किङ साइटको कसरी प्रयोग भइरहेको छ जस्तो लाग्छ ?
व्यक्तिगत रुपमा मात्रै सिमित छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
मेरोरिपोर्ट तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?
मेरोरिपोर्टले नागरिक पत्रकारिता गरिरहेको छ । यसको सदस्यले पोस्ट गर्न पाउँछन् । पोस्ट गर्न पाउँछौं । साताको ब्लगर स्तम्भले नयाँ पुराना ब्लगरलाई एकै ठाँउमा ल्याउने काम गरेको छ । यसकोलागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
मेरोरिपोर्टलाई केही सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?
पाठकलाई ध्यान दिएर चलाउनुहोला भन्न चाहन्छु ।
झलकको ब्लग: http://jhaluck.blogspot.com/
Comment by Indra Dhoj Kshetri on July 6, 2012 at 1:44pm
Congratulations Jhalakji! I agree with Binayashekhar that you can help blogging flourish outside the capital too. :)
Comment by Binaya Shekhar on July 5, 2012 at 8:10pm
Congratulations. Blogging is still new among many. Asaprominent blogger you can promote blogging and encourage people of your community to use MeroReport to learn blogging and social media. Nice to read your opinion.
Comment by Amuna Chapagain on July 5, 2012 at 10:32am
Comment by प्रेम पौडेल (मरूभूमिको यात्री) on July 5, 2012 at 9:42am
Congratulation Jhalak Jee !!!!
Comment by Ajeeta Sigdel on July 4, 2012 at 4:29pm